13ka Dugsi Caafimaad Ee Ugu Sarreeya Oo Lacag La'aan Ah 2022
Waxaa jira dugsiyo caafimaad oo leh waxbarasho lacag la'aan ah kuwaas oo ay u badan tahay inaadan wax fikrad ah ka haysan inay jiraan. Maqaalkan, waxaan kaga hadalnay waxbarashadan dugsiga caafimaadka ee bilaashka ah iyo sida ardayda xiisaynaysa ay u heli karaan.
Barnaamijyada caafimaadka waxaa meel walba oo dunida ka mid ah laga yaqaana inay yihiin kuwa walaaca badan, adag, dheer, iyo ugu badnaan, aad qaali u ah. Barashada daawada iyo barnaamijyadeeda la xiriira meel kasta oo adduunka ah waa qaali, kani waa run la wada leeyahay oo tan kaligeed ayaa curyaamisay riyadii arday badan oo dugsi sare ah oo doonaya inay sii wataan si ay u noqdaan dhakhaatiir iyo dhakhaatiir.
Sikastaba, way fududahay maalmahan maadaama ay jiraan deeqo waxbarasho iyo habab kale oo kaalmo maaliyadeed oo ka imanaya ururo kala duwan sida aasaaska samafalka iyo xitaa mararka qaarkood shaqsiyaadka hodanka ah. Kuwani sidoo kale waa qaar ka mid ah fursadaha looga hadlayo balooggan maaddaama sidoo kale lagu faray inay ku siiyaan waxbarasho lacag la'aan ah waxbarashadaada caafimaad.
Waa inay noqotaa wax aan la rumaysan karin marka hore inaad ogaato inay jiraan iskuulo caafimaad oo lacag la'aan wax lagu barto, hase yeeshe, markaad sii wadato akhrinta waxaad arki doontaa oo xaqiijin doontaa inaysan run ahayn oo kaliya laakiin adiguna runtii waad heli kartaa. Marka, haddii aad had iyo jeer rabto inaad ku sii wadato shahaado xagga caafimaadka ah oo aadan awoodin sababo la xiriira caqabado maaliyadeed, halkan waa fursad ay tahay inaadan seegin.
Iskuulada caafimaadka ee waxbarista bilaashka ah waxay noqon karaan qaab deeq waxbarasho, deeqo, wehelnimo, bursaries, ama nooc kasta oo kaalmo maaliyadeed ah. In kasta oo lagu dabaqi karo waxbarashadaada caafimaad oo ay dib u dhigto waxbarashadaada sannad, laba, ama ka badan markaa waxaad ka heli doontaa halkan oo aad awooddaa inaad iyagana hesho.
Sidoo kale, fursadahaan waxaa bixin kara jaamacadaha ama dowladda dal, haddii taasi dhacdo markaas ardayda jaamacaddaas ama muwaadiniinta dalkaas kaliya ayaa heli kara. Si kastaba ha noqotee, qaar ayaa sii wata inay u fidiyaan ardayda caalamiga ah, qof kasta oo u qalma mid ka mid ah fursadahaan si habboon ayaa loogu sheegi doonaa ujeeddooyin cad.
Iyada oo aan la sii dheereyn, aan u gudubno mawduuca ugu weyn sidoo kale, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad isticmaasho shaxda hoose si aad ugu dhex marto maqaalkan.
Waa maxay Iskuulka Caafimaadka?
Ma jiraan dugsiyo caafimaad oo lacag la'aan wax lagu barto?
13ka Dugsi ee Caafimaadka Waxbarshada Bilaashka ah ee ugu Fiican (dugsiga caafimaadka bilaashka ah)
1. Jaamacadda New York Grossman School of Medicine
2. Jaamacadda Bergen
3. Jaamacadda xorta ah ee Berlin
4. Kuliyadda Dhakhaatiirta iyo Dhakhaatiirta Qalliinka ee Vagelos
8. Jaamacadda Farsamada ee Munich
9. Jaamacadda Umea
10. Kuliyadda Caafimaadka Jaamacadda King Saud
11. Jaamacadda Caafimaadka ee Vienna
12. Jaamacadda Poznan ee Cilmiga Caafimaadka
13. Dugsiga Caafimaadka ee Jaamacadda Washington
Iskuulada Caafimaadka ee Yurub oo leh Lacag Bilaash ah
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Iskuulada Caafimaadka ee Bilaashka ah oo leh Lacag La'aan
Dugsi caafimaad ama dugsi caafimaad - sida caadiga ah loogu yeero - waa hay'ad waxbarasho sare oo baraysa daawada, u qalabeysa xirfadaha ardayda, kuna abaalmarineysa shahaado xirfadeed si ay uga dhigto kuwo u qalma inay ku bartaan maadada caafimaad ee ay doorteen.
Iskuulada caafimaadka ee waxbarista bilaashka ah ayaa looga dooday laguna sharraxay maqaalkan, haa, way jiraan, oo macluumaad ku filan, adiguna waad iska qori kartaa mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee bilaashka ah si aad u sii wadato barnaamij caafimaad oo aad dooratay.
13ka Dugsi ee ugu Fiican Waxbarasho Bilaash ah
(dugsi caafimaad oo bilaash ah)
Halkan, iskuulada caafimaadka ee waxbarista bilaashka ah ayaa la taxay oo laga dooday, xiriiro ayaa sidoo kale laguu siiyay si aad awood ugu yeelatid inaad barato tafaasiil dheeri ah sida sida loo codsado barnaamijka caafimaadka ee aad dooratay, waqtiga kama dambaysta ah ee arjiga, shuruudaha u -qalmitaanka, iyo inbadan.
Iskuuladan caafimaadka bilaashka ah waa:
Jaamacadda New York ee Grossman School of Medicine
Jaamacadda lacag la'aanta ah ee Berlin
Kulliyadda Vagelos ee Dhakhaatiirta iyo Dhakhaatiirta qalliinka
Kulliyadda Caafimaadka ee Cleveland Clinic Lerner (CCLCM)
Jaamacadda Farsamada ee Munich
Kulliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda King Saud
Jaamacadda Caafimaadka ee Vienna
Jaamacadda Poznan ee Sayniska Caafimaadka
Jaamacadda Washington University School of Medicine
NYU Grossman School of Medicine waxay ahayd hay'addii ugu horreysay ee bilawday waxbarasho caafimaad oo lacag la'aan ah, waxay biloowday qorshahan ah bixinta iskuulka caafimaadka lacag la'aanta ah ee 2018 iyo iskuullada kale ayaa raacay. Waxa ay NYU qabato ayaa ah inay siiso deeqo waxbarasho oo buuxa ardayda hadda iyo kuwa soo galaya haddii loo baahdo ama ku saleysan mudnaan.
Kani asal ahaan waa dugsigii ugu horreeyay ee lacag la'aan ah oo bilaash ah oo laga bilaabo Mareykanka, taas marka laga reebo, waxaa si joogto ah loogu daraa mid ka mid ah iskuullada caafimaadka ee ugu sarreeya Mareykanka iyo adduunka. Markaa, marka aad halkan ka codsato barnaamijka caafimaadka oo aad hesho waxa aad ka helaysaa waxbarasho caafimaad oo heer caalami ah oo aad ka helayso kuwa aduunka ugu wanagsan oo aanad wali bixin kharashka waxbarashada.
Si aad u gasho barnaamijka caafimaadka waxaad u baahan tahay inaad qanciso shuruudaha gelitaanka iyo kuwa kale oo kaa dhigi doona inaad u qalanto dhaafitaanka waxbarashada. Xiriirinta hoose ayaa kuu kala sooci doonta dhammaan kuwan.
Kulliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda Bergen, Norway, waa mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu sarreeya oo waxbarid lacag la’aan ah. Qaar badan, haddii aaney dhammaan, dugsiyada dadweynaha ee Norway gabi ahaanba waa lacag la'aan ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha si ay u bartaan barnaamij kasta oo ay doortaan. Fursaddaas waxaa loo adeegsan karaa in lagu barto barnaamijka caafimaadka ee xiisaynaya danahaaga ama aad xamaasad u qabto.
In kasta oo ardaydu aysan bixin doonin waxbaridda laakiin waa inay bixiyaan khidmadda dalabka oo ay daryeelaan gunnadooda nololeed. Sidoo kale, kulliyadda dawadu waxay bixisaa koorsooyin iyo shahaadooyin bachelor -ka, master -ka, iyo heerarka daraasadda ee PhD.
Jaamacadda Bilaashka ah ee Berlin, sida magacu tilmaamayo, dhab ahaantii waa lacag-la’aan, jaamacad cilmi-baaris heer caalami ah oo ku taal Berlin, Jarmalka oo siisa waxbarasho lacag la’aan ah dhammaan koorsooyinka ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee doonaya inay shahaadada ka qaataan dugsiga. Waa mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee waxbarista bilaashka ah waxaadna u adeegsan kartaa faa'idada bilaashka ah ee machadka si aad ugu sii wadato shahaadada daawada lacag la'aan.
Ardayda ku jirta barnaamijka caafimaadka waxaa lagu qaadi doonaa safarka waxbarashada caafimaadka caadiga ah waxaana la siin doonaa shahaadooyin laga aqbalay meel kasta oo adduunka ah.
Kani waa dugsiga caafimaadka ee Jaamacadda Columbia iyo mid ka mid ah iskuulada med ee dalka si ay u siiso 100% deeq waxbarasho oo dhammaystiran ardaydeeda caafimaadka. Sanadkii 2017, Jaamacadda Columbia waxay bilowday deeq waxbarasho oo loo yaqaan Barnaamijka Deeqda -waxbarasho ee Vagelos waxaana la siiyaa ardayda muujiya baahida dhaqaale.
Barnaamijka deeqda waxbarasho waxaa loogu talagalay ardayda cusub ee MD ee u qalma. Si loo tixgeliyo, ardaydu waxay u baahan doonaan inay soo gudbiyaan codsiyada kaalmada maaliyadeed oo dhammaystiran. Haddii aad raadinayso mid ka mid ah iskuulada caafimaadka oo leh lacag -bixin lacag la’aan ah waa inaad tixgelisaa inaad codsato Jaamacadda Columbia oo aad fursad u hesho inaad u -qalanto Barnaamijka Deeqda -waxbarasho ee Vagelos.
Bishii Febraayo, 2019, Dugsiga Caafimaadka ee Kaiser Permanente ayaa ku dhawaaqay inay bilaabi doonto daboolidda waxbarashada iyo khidmadaha shanta fasal ee ugu horreeya ardayda laga bilaabo 2020 illaa 2024. Marka, haddii aad rabto inaad hesho waxbarasho caafimaad oo lacag la'aan ah waa inaad ka dalbataa Kaiser oo aad ku raaxaysataa waxbarasho lacag la'aan ah.
Tani waxay ka dhigeysaa mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee waxbarista bilaashka ah iyo 48 arday oo kaliya ayaa loo tixgelin doonaa ka -dhaafitaanka waxbarashada. Waxaad u baahan doontaa inaad samayso arji hore oo aad yeelato waxqabad aad u fiican oo ka dhigi kara machadku inuu ku tixgeliyo.
Kani waa dugsiga caafimaadka ee Jaamacadda Cornell, oo ah jaamacad Ivy League ah, waxaana caadi ahaan loo yaqaan Weil Cornell Medicine, mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee ugu sarreeya oo leh lacag -la’aan lacag la’aan ah, oo la aasaasay 1898 oo ah unug cilmi -baaris biomedical ah. Kulliyaddu waxay dhowaan ku biirtay liiska iskuulada caafimaadka ee lacag la'aanta ah waxayna si kale u bixisaa waxbarashada lacag la'aanta ah.
Dugsiga caafimaadka ee Cornel wuxuu bixiyaa daraasado lacag la'aan ah ardayda muujisay inay u baahan yihiin kaalmo dhaqaale oo haddii aad u qalanto, waxaad bilaabi doontaa inaad hesho deeqo waxbarasho oo taxane ah si aad u daboosho waxbarashadaada dugsiga caafimaadka sanadkaaga ugu horreeya. Intaa waxaa dheer, ardayda raacda labada MD iyo Ph.D. shahaadooyinka waxay heli karaan waxbarid buuxda iyo gunnooyin ay ku daboolaan kharashkooda nololeed dugsiga iyo machadyada caafimaadka qaranka.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan u qalmin gargaarka maaliyadeed ee ku saleysan baahida waxaad weli yareyn kartaa qiimaha waxbarashadaada adigoo ku hawlan waxqabad manhaj ah oo uu bixiyo dugsigu sida adeegga bulshada.
Waxay ku taal Cleveland, USA, oo la aasaasay 1843, CCLCM waa barnaamij ka mid ah Jaamacadda Kaydka Western University School of Medicine, oo ku taal Cleveland, Ohio, Mareykanka. Sannadkii 2008dii, CCLCM waxay bilawday inay ardayda siiso waxbarasho lacag la'aan ah si ay ugu daboolaan waxbarashadooda caafimaadka.
Sannadkii, ku dhawaad ​​2,000 oo qof ayaa u tartamaya boosaska waxbarashada bilaashka ah laakiin kaliya ilaa 32 qof ayaa had iyo jeer la soo xulaa. Ujeedada laga leeyahay waxbarashadan caafimaad ee bilaashka ah ayaa ah in ardayda laga dulqaado culayska saaran ee ah in ay bixiyaan kharashka waxbarashada caafimaadka, taas beddelkeedana ay wajahaan waxbarashadooda oo ay u raadsadaan dawo waxbarasho iyo cilmi-baadhiseed oo ay xiiseeyaan.
Kani waa machad sharaf leh oo waxbarasho sare ku leh Jarmalka oo bixiya barnaamijyo aad u ballaaran oo ku saabsan aagagga injineernimada, daawada, ganacsiga, iyo inbadan. Halkan, ardaydu uma baahna inay ka walwalaan bixinta khidmadaha waxbarashadooda caafimaad maadaama ay siiso waxbarasho lacag la’aan ah ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha.
Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso semester $ 127 oo aad sidoo kale daboosho kharashyada noloshaada. Xaqiiqdii, jaamacaddu waxay siisaa barnaamijyo badan barnaamijyo waxbarasho lacag la’aan ah marka laga reebo barnaamijka MBA. Ardayda caafimaadka waxay tan u adeegsan karaan si ay ugu faa'iideystaan ​​inay ku sii wataan shahaado mid kasta oo ka mid ah goobaha caafimaadka.
Marka, haddii aad raadinayso iskuulo caafimaad oo leh waxbarasho lacag la'aan ah waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso Jaamacadda Farsamada ee Munich.
Jaamacadda Umea waxay ku taal dalka Iswiidan waxayna sida jaamacad kasta oo caadi ah u leedahay kulliyadda caafimaadka oo ku hawlan waxbarashada iyo cilmi baarista dhinacyada caafimaadka, odontology, iyo caafimaadka. Jaamacaddan ayaa bixisa waxbarasho guud oo lacag la’aan ah, waxaana dhihi karnaa waa mid ka mid ah iskuulada caafimaadka ee lacag la’aanta lagu barto maadaama aad ka codsan karto waxbarashadaada caafimaadka ee kuliyada caafimaadka ee jaamacadda.
Waxbarashada lacag la'aanta ah ayaa kaliya lagu dabaqi karaa ardayda ka socota waddamada EU iyo EEA waxaana laga yaabaa inaysan u ahayn xulasho ku habboon ardayda caalamiga ah maadaama aad ku bixin doonto qiyaastii $ 3,500 sanadkii hal barnaamij.
Kulliyadda Caafimaadka ee Jaamacadda King Saud ayaa la aasaasay 1967 iyada oo ah kuliyaddii ugu horreysay ee caafimaadka ee Sacuudi Carabiya, waa mid ka mid ah iskuullada caafimaadka ee wax lagu barto lacag la’aan. Marka laga reebo kharashka ku baxa kharashka nolosha, dugsigu wuxuu daboolaa waxbarashadaada oo xitaa wuxuu siiyaa gunnooyin ardayda inta ay waxbarashadooda ku jiraan.
Dugsiga caafimaadka waxa uu qaabilaa ardayda aduunka dacaladeeda ka kala yimid ee soo codsaday barnaamijkooda caafimaadka. Sacuudi Carabiya waa waddan ay ku nool yihiin dad kala duwan oo leh dhaqamo kala duwan, in aad halkan u tagaan si ay u bartaan waxay noqon doontaa waayo-aragnimo xiiso leh.
Waxay ku taal Vienna, Austria, oo loo aqoonsaday inay tahay mid ka mid ah dugsiyada caafimaadka ee leh waxbarasho bilaash ah, Jaamacadda Caafimaadka ee Vienna waxaa la aasaasay 2004 oo hadda waa dugsiga caafimaadka ee ugu weyn Austria. Machadku waxa uu ku takhasusay Daawaynta Aadanaha iyo Ilkaha
Ardayda ka socota Midowga Yurub waa laga dhaafaa inay bixiyaan kharashka waxbarashada halka ardayda aan EU-da ahayn laga qaado kaliya 800 oo Yuuro sanadkii taasna xitaa wali way ka jaban tahay dugsiyada kale ee med. Sidoo kale, codsadayaasha aan EU-da ahayn ee soo galaya barnaamijka caafimaadka waxay u baahan doonaan inay soo gudbiyaan warqad aqbalida dugsiga caafimaadka ee dalkooda.
Kani waa jaamacad sharaf ku leh Poland, caan ah oo ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dalka. Poland waxaa lagu yaqaanaa waxbarashadeeda waxbarashada hooseysa, xitaa qaar ka mid ah jaamacadaha dadweynaha ayaa xor u ah muwaadiniinteeda iyo ardayda ku jirta waddamada EU iyo EAA.
Waxbarashada caafimaadka ee halkan waa heer sare oo waxaad u isticmaali kartaa waxbarashada bilaashka ah ee dugsiga xagga waxbarashadaada caafimaadka oo aad ku sii wadan karto shahaado dhinaca caafimaadka ee aad dooratay. Jaamacadda Poznan ee Sayniska Caafimaadka waa mid ka mid ah dugsiyada caafimaadka ee ugu sarreeya ee leh waxbarasho bilaash ah iyo xitaa haddii aadan ka iman waddamada EU ama EAA, waxbarashadu sidoo kale way ka hooseysaa marka loo eego waddamada kale.
Ku biirista liiska dugsiyada caafimaadka ee leh wax-barashada bilaashka ah waa Jaamacadda Washington School of Medicine, tani waa jaamacada ugu sareysa Mareykanka oo haddii aad lacag la'aana ka heshay lacag si aad daawo bilaash ah ugu barato halkan, waa inay noqotaa waxa ugu fiican. Waxaad ka heli doontaa xirfado caafimaad oo tayo leh oo aad ka heli doonto dugsiga ugu wanaagsan ee med-duni oo lacag la'aan ah laakiin waxaad u baahan doontaa inaad daboosho kharashaadkaaga nolosha oo aad qaali u ah waana inaad ka fiirsato qodobkan ka hor intaadan halkan wax ku baran.
Haddii aadan helin waxbarashada oo si buuxda u dabooli doonta waxbarashadaada caafimaad, waxaad sidoo kale heli kartaa kaalmada maaliyadeed qayb ahaan iyo noocyada kale ee gargaarka maaliyadeed. Miisaaniyadda waxbarashada waxaa lagu bixiyaa iyada oo ku saleysan mudnaanta, baahida, ama labadaba.
Iskuulada caafimaadka ee Yurub ee waxbarista bilaashka ah waa:
Jaamacadda Lund, Sweden
Cleveland Clinic Clinic College of Medicine
Dugsiga Caafimaadka ee Kaiser Permanente
Jaamacadda Bergen, Norway
Kuwani waa iskuulada caafimaadka ee waxbarista bilaashka ah ku leh Yurub iyo adduunka oo dhan, qaarkood waxay aqbalaan ardayda caalamiga ah halka kuwa kalena aysan aqbalin, guji xiriirinta la bixiyay si aad wax badan uga ogaato shuruudaha barnaamijka gaarka ah.
Waa maxay iskuulka caafimaadka ee bixiya lacag -la'aanta waxbarashada?
Iskuulada caafimaadka ee bixiya waxbarashada lacag la'aanta ah waa:
Jaamacadda bilaashka ah ee Berlin
Dugsiga Caafimaadka ee Cornell
Iskuulka Caafimaadka ee Jaamacadda New York
David Geffen Iskuulka Caafimaadka
Jaamacadda Caafimaadka ee Vienna iyo qaar kaloo badan oo la qoray oo laga dooday qoraalkan baloogga.
Suuragal ma tahay in si buuxda loo raaco iskuulka caafimaadka?
Markay tahay “raacid buuxda” waxay ka dhigan tahay deeq waxbarasho oo dabooli doonta waxbarashadaada oo dhan inta aad dugsiga joogto. In yar oo ka mid ah iskuulada caafimaadka ee waxbarista lacag la'aanta ah ee looga hadlay boostadan ayaa bixiya raacitaan buuxa ee dugsiga caafimaadka adiguna waad heli kartaa haddii aad qanciso shuruudaha u -qalmitaanka oo badiyaa aad u adag oo aad u tartamaya.
Ma jiraan dugsiyo caafimaad oo lacag la'aan ah?
Haa, waxaa jira iskuulo caafimaad oo lacagla'aan ah ama deeq waxbarasho iyo qaabab kale oo kaalmo maaliyadeed ah oo loogu talagalay in qiimaha waxbarashada caafimaadkaaga hoos loo dhigo.
Tani waxay soo afjari doontaa 13 -ka dugsi ee caafimaadka ugu sarreeya oo waxbarid lacag la'aan ah waxaana rajeyneynaa, inay tahay inay si uun ama si kale u caawisay. Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad eegto talooyinka hoose si aad u sii barato fursadaha dibadda.
Aqoonsiga Dugsiyada Caafimaadka ee Kariibiyaanka: Sababta ay Muhiim u tahay
Shaqooyinka Caafimaadka ee Ugu Lacagta Badan Iskuulada yar
Biilasha Caafimaadka Iyo Koodh Bixinta Koorsooyinka Khadka Tooska ah
Dugsiyada Caafimaadka ee Jaban ee Australia ee Ardayda Caalamiga ah
Immisa ayay ku kacaysaa in wax lagu barto dugsiga caafimaadka Caribbean?
Dugsiyada Waxbarshada Bilaashka ah Deeq waxbarasho oo buuxa Jaamacadaha Waxbarashada Yar Barashada Hagaha Dibadda Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo
iskuulada caafimaadka ugu fiican ee bilaashka ahdugsiyo caafimaad oo lacag la'aan ahdugsiyada caafimaadka oo waxbaridoodu hooseysoiskuulada caafimaadka ugu sareeya ee bilaashka ah
Previous Post:Shaqooyinka Jirka 13 ee Ugu Fiican oo Bixiya
Post Next:30 Dugsiyada Injineeriyada Biyomediga ugu Fiican